Isithuthi mqengqeleki, Ukuqhuba mqengqeleki, Idler yokuthutha - Joyroll
Isondo elihambayo zizinto zeenkqubo zokuhambisa ibhanti njengoko zibonelela ngenkxaso yomthwalo kwicala lokuhamba kunye nakwicala lokubuyela.
Abavelisi abaphambili bezixhobo zokusebenza zokuhambisa okuphezulu
Umgangatho oGqwesileyo, ukuHanjiswa kunye neNkonzo yaBathengi
Umgca opheleleyo wokuhambisa
I-idler, roller, pulley idibana okanye idlule i-DIN, AS, JIS, CEMA, SANS-SABS, GOST, AFNOR Standard njl.
Irabha Disc Buyisela mqengqeleki
Inkcazo irabha ...
Inkcazo Le nsimbi yentsimbi ...
Ukufunxa ngokuqhuba i-Idler
Inkcazo yokuThoba / iMoto ...
Inkcazo yokubuyisa id ...
Irabha Disc Buyisa Idler
Ukulungelelanisa ngokwakho ukuHamba u-Idler
Inkcazo yokuLungelelanisa ...
Irabha Impembelelo mqengqeleki
Ingcaciso Impembelelo yeroli ...
Irabha mqengqeleki mqengqeleki
Inkcazo ngerabha Laggin ...
Inkcazo yempembelelo ...
Inkcazo I-spi yentsimbi ...
Self-Aligning Buyisa Idler
I-Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co, Ltd. eyasekwa ngo-2008, i umenzi ngobuchule yokuthutha ibhanti kunye namalungu. Efektri yethu ibekwe feixiang park mveliso, handan isixeko, kwiphondo hebei, China, egubungele 33000 square metres. Umzi-mveliso wethu unelizwe lokuqhubela phambili elizenzekelayo elihamba phambili kwimveliso yokuhambisa imveliso, sele uqhubekile umgca wemveliso yokwaleka komgubo, kunye noluhlu olupheleleyo lokuhambisa izixhobo zokuvavanywa kwezixhobo ...
NgoJanuwari / 06/2021
UJoyroll ubonakalisa kwi-INTERMAT, eyenzeka phakathi kwe-23 ne-28 ka-Epreli 2018 eParis, eFrance. Isalathiso sokuhambisa, ukuhambisa, ukuhambisa, ukuhambisa, kuya kuboniswa kumboniso wezorhwebo. Uluhlu olupheleleyo lweemveliso kunye nolwazi kurhwebo luya kuboniswa. Sijonge phambili ekwamkeleni ...
I-Prospectors & Developers Association yaseCanada (PDAC) lilizwi eliphambili lokuhlola kunye nophuhliso loluntu. Ngaphezulu kwamalungu angama-7,200 kwihlabathi liphela, amaziko omsebenzi wePDAC ekuxhaseni icandelo lezemigodi elikhuphisanayo nelinoxanduva. I-PDAC yaziwa kwihlabathi liphela ngonyaka ...
UMHLAZIYO CHILE 2019
I-Exponor, ibonisa ukuba iyenzeka e-Antofagasta-eChile qho emva kweminyaka emibini, ikhonkco lenkqubela phambili yamva nje ejolise kwicandelo lezemigodi. Ingumthombo weqhinga lolwazi kutyalo-mali lwexesha elizayo kunye nethuba lokwabelana emhlabeni kunye neenkampani kunye nababonisi. Ummandla weAntofagasta une ...